Abdul Samad Rabiu, CEO weB BUA boka: "Mu cement, kudzoka kwekutsvaga kwekutsvaga kunoshamisa" - JeuneAfrique.com - TELES RELAY
HOME » upfumi Abdul Samad Rabiu, CEO weB BUA boka: "Mu cement, kudzoka kwekutsvaga kwekutsvaga kunoshamisa" - JeuneAfrique.com
Uyu muNigerian mogul akashandura mumakore achangopfuura pamusoro pehuga uye kunyanya nesimenti. Kuna JA, anotsanangura zvikonzero zvechisarudzo ichi - uye anovhiringidza nharo yake naAliko Dangote.
Abdul Samad Rabiu, 59, haasi weBigeria mabhiriyoni akaita seumwewo. Haasi kuzere neboka revarayiridzi. Kusvika panguva apo paunodzoka. Usanetseka pamusoro pemhando ipi zvayo. Uye anosemwerera achida. Kana asina chinhu che "new rich" ndechokuti hachisi chaicho ... Chikamu cha Abdul Samad Rabiu, akaberekerwa muKano (North) uye mugari wenhaka kune mumwe wevashandi vokutanga kubva kuNigeria, inoratidzika seye mukuru wake Aliko Dangote (makore gumi nemana 62).
Anotangazve nyaya dzemhuri mu1984, mushure memakore mashomanana okudzidza muUnited States (Capital University, Columbus, Ohio), apo baba vake vasungwa mujeri nehutungamiri hweGeneral Buhari nekuda kwekusateerera mitemo pa import of rice. Kutengeserana kokutanga-kutumira-kutumira (rice, mafuta anodyiwa, upfu, huni, iron, makemikari ...), anokurumidzira kupinda mubhizimusi (kutenga BAD Mafuta, mu1991, uye Golden Oil, mu2000), ipapo, mu2002, mu samente (kutenga CCNN). Iyi ndiyo kutanga kwemutsara wakareba wekubudirira.
Mukoti wepachirwere paCambridge Hospital Anotapirwa nevana Zvinonyadzisira - xnxx
Opinion | Allyson Felix: Ini ndiri pamuviri nhau kuNaike - New York Times
ក្លឹប Liverpool លក់ លក់ Mohamed Shera ណះ ណះ លក់ Liverpool យក អ្នកចាំទី Sal ស្អ HD - VIDEO
Cameroon: Kuvhurwa kwekutanga yekugadzirwa kwema digital in Yaoundé, zvinopfuura teknolojia yekufambira mberi
India: Kwete nokuda kwebasa rakauya mune zvematongerwo enyika: Urmila
VANHU & VANHU3,843